Ziziphi izinto eziphambili eziqwalaselwe yi-Amazon usetyenziso lwe-algorithm?
Ukuba usebenzisa i-e-business yakho ye-ecommerce ibhizinisi e-Amazon, kufuneka uqhelane nesimo sokuqala se-Search Engine Optimization (SEO). Ingabonakala ngathi ayikho-brainer, kodwa yonke injini enkulu yosesho (njenge-Google ngokwalo, kunye ne-Yahoo, iBing, njl. ) ine-algorithm yayo - blue book value for used semi trucks. Nangona kunjalo, abaninzi abanomashishini be-intanethi abathengisa ngaphaya kwabo abaqapheli ukuba ubukho be-Amazon bubeka i-algorithm. Yingakho ngaphantsi ndiza kukubonisa izinto eziphambili ze-Amazon ezibeka ubuchule bokubheka kwi-algorithm, exhaswa ngezinto eziphambili zokubeka uluhlu lwemveliso yakho ngokucwangciswa ngamacandelo. Ngale ndlela, uya kuqonda indlela yokwenza umxholo wemimiselo kwiphepha lakho lemveliso. Ekugqibeleni, ukufumana iimveliso zakho kwi-top ye-Amazon yophando oludweliswe kwizinto ezithengisa kakhulu.
Kwi-page ye-SEO Factors kwi-Amazon Usetyenziso lwe-Algorithm
Nazi izinto eziphambili ezifumaneka kwiphepha lakho lomkhiqizo onquma i-Amazon. Ukwazi kwabo bonke kuya kukunceda ukuba uqonde kakuhle into ekufuneka yenziwe ngohlalutyo lwemveliso yakho ekusebenziseni ukuthengisa okuphezulu kunye nokubonakala kwakho kwe-intanethi kuphuculwe kwi-degree.
Isihloko sakho somkhiqizo sisiqendu sokuqala sephepha lakho lomkhiqizo we-Amazon eliphethe ukubaluleka okukhulu kwi-SEO ngaphezu kwayo. Kunjengeko xa kuthengiswa iinjinjini eziqhelekileyo, i-Amazon usetyenziso lwe-algorithm ichaphazeleka kakhulu ngetekisi yomxholo oyintloko. Ngaloo ndlela, unamaqhosha angama-500 onawo ukuba usebenzise amagama akho angundoqo acaciswe ngokuchanekileyo kunye neyona ndlela ehamba phambili yokukhangela umsila wokubhenca kwi-intanethi ngaphezulu.
Ingxenye elandelayo yephepha lakho lemveliso elifunyenwe ngaphantsi kwesihloko somkhiqizo. Nangona akukho bubungqina obusemthethweni obubonisa ukuba le nyaniso, kodwa iingongoma zengqungquthela zinokuba nefuthe elikhulu ekuqhubeni inkqubela yakho. Ukusebenza njengesishwankathelo esicocekileyo nesicacileyo semveliso yakho, iindawo zebhola ziindawo ezintle zokubandakanya ezinye zeenkcukacha eziphambili ezijoliswe kuyo ezithengisa into yakho ekuthengisweni ukusuka kumacandelo angcono.
Icandelo lokugqibela lephepha lakho le-Amazon elibonakalayo kumveleli liyimveliso yakho yemveliso. Enyanisweni, inguhlobo olongezelelweyo lwoluhlu lweebhola. Yintoni enye - ngokubhekiselele ku-Amazon usetyenziso lwe-algorithm, eli candelo lingafunwa ngokusemthethweni, ubuncinane kwiinjongo zokusebenzisa ngqo. Nangona kunjalo, ukuchazwa kwemveliso egcweleyo kubaluleke kakhulu. Ewe, ukuba ufuna ukubeka kakuhle i-Amazon.
Eli candelo le-backend amagama akwii-keywords kunye nemigqaliselo yokukhangela empeleni ayibonakali kwiindwendwe zakho. Kodwa eli candelo lijoliswe ngokukodwa ekuthwaleni onke amagama angundoqo afanelekileyo - nje ngenjongo yokubeka indawo. Ngaloo ndlela, khumbula ukuba ama-Amazon abuyele amagama akwiyona nto iyona nto ingcono yokubeka zonke iikopi zakho eziphambili ezibekiweyo kwisihloko sakho somkhiqizo okanye inkcazelo yomkhiqizo.I-MAybe uza kuba nelithuba elifanelekileyo lokubuyela ngexesha elithile kwaye wenze ukuhlaziywa ukwenzela ukuba inxalenye yamagama angundoqo akwi-backend atshintshe ngokuthe ngcembe ukwenziwa kwezinto ezingaphantsi kwesihloko somkhiqizo wakho, inkcazo, okanye uluhlu lwamaphupha.